Le Louvre – Antaninarenina : Divay sy Fromazy ary Jazz -
AccueilVaovao SamihafaLe Louvre – Antaninarenina : Divay sy Fromazy ary Jazz
Le Louvre – Antaninarenina : Divay sy Fromazy ary Jazz
Miara-dia hatrany amin’ny seho takariva ny tontolon’ny sakafo. « Divay sy fromazy ary Jazz » no lohatenin’ny hetsika atolotry ny trano fisakafoanana 313 etsy amin’ny Hotel Le Louvre Antaninarenina, anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Hitondra ny talentany amin’izany i Sandrine Rajaofetra, mpihira sy mpamoron-kira eo amin’ny sehatry ny jazz. Mivelatra amin’ny karazana hira maro ny seho ataon’ity mpanakanto lehibe tao anatin’ny tontolon’ny jazz ity.
Piment Café- Behoririka
Tôty sy ny mozikany…
« Lalao iray izay tiany indrindra… » io no lohatenin’ny fampisehoana miainga amin’ny Tôty sy ny mozikany etsy amin’ny Piment Café Behoririka anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Fotoana hitondran’ity mpitendry gitara beso ity hanehoana an-tsehatra ireo hira noforoniny. Hanotrona azy amin’izany seho izany ry Antsiva (feo), Bim (Ampongalava), Harintsoa (Saxe), Lilian (Vatamaroafitsoka), Fandresena (gitara) ary Fihoarana (amponga maroanaka).
Mozika Rock sy ny tarika Iraimbilanja
Mpiangaly ny gadona rock anisan’ireo zokiny nefa mbola mitana ny maha-izy azy. Hampiaina indray ireo mozika rock etsy amin’ny Trass Tsiadana anio alina ny tarika Iraimbilanja. Ho voizin-dry Batata sy ny namany mandritra ny seho ireo hira nahafantarana ny tarika hatramin’izay toa ny « Zavavy », « Tsindrimandry », « Tehina »… Mahazatra ny tarika ihany koa anefa amin’ny seho takariva toa izao ny findramana ny sangan’asan’ireo mpanakanto vahiny sangany amin’ny mozika rock toa an-dry Dire Straite…
Hampianoka jazz ny Jazz Club CGM
Iray amin’ireo sekoly mampianatra mozika ny CGM. Maro ireo mpianatra nandalo tao no efa manana ny anjara toerany eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy. Toa ny fanaony dia misy hatrany ny seho ataon’ireo mpianatra ka hampianoka izany mozika jazz izany, etsy amin’ny CGM Analakely ny Jazz Club CGM ny alahady izao manomboka amin’ny 3 ora. Ireo mozika efa mahazatra ao anatin’izany sehatry ny jazz izany no entin’izy ireo amin’io seho io.
Fara West- Faravohitra
Tarika Oxow hitondra blues, rock ary jazz
Ireo mpiodana mozika dia mahay tsara izany tarika Oxow izany. Ireo andrarezin’ny mozika rahateo no mandrafitra ny tarika. Tsy fantatra mazava izay tena gadona hifantohan’izy ireo fa saika lalaoviny avokoa na ny blues, na ny rock, na ny Jazz. Haneho izany rahateo ry Andry Ramamonjisoa sy ny tariny rahampitso alina etsy amin’ny Fara West Faravohitra manomboka amin’ny 8 ora alina. Hanampy azy amin’izany i Eric Rakotoary (gitara beso), Nali Rabarison (amponga maroanaka) ary Titi Razakamiadana (Saxe).